Chishanu, 21 Gunyana 2018
MWARI VANODA KUTI UVE MUNHU MUKURU
"Imi muri munyu wenyika, asi kana munyu wadurungunda, ucharungwa neiko? Hauchabatsiri chinhu, asi kurashirwa kunze utsikwe navanhu" (Mateo 5:13).
VaGaratia 3:29 inotaura ichiti, "Zvino kana muri vaKristu, muri vana vaAbrahama, vadyi venhaka sezvamakapikirwa". Mwari vakanga vataura kuna Abrahama. Tinoverenga mashoko avo muna Genesi 22:18. Vakanga vati, "Ndichakuita munhu mukuru. Ndichashandisa mwana wako kuropafadza ndudzi dzose dzenyika ino". Iwe uri mwana wedzinza raAbrahama. Saka ndima iyi iri kutauravo pamusoro pako. Uri werudzi rwevanhu vakuru. Uri chiropafadzo kunyika yako.
Mwari vakaronga kuti tive vanhu vakuru. Vakarongera izvi vana vavo vose. Vanoda kushandisa mumwe nemumwe wedu. Vanoda kutishandisa muzvinhu zvakasiyana siyana. Asi zvinhu izvi zvinenge zviri kubatsira kuti zvinangwa zvaMwari zvibudirire panyika. Kune vanhu vakazvarwa naMwari. Mumwe nemumwe wevanhu ava ndewerudzi rwevanhu vakuru. Mabasa ako haasi iwo anokuita munhu mukuru. Izvi ndizvo zvatinovona muBhaibheri. Tinoverenga mashoko aro muna VaEfeso 2:8-9. Anoti, "Nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; izvo zvisingabvi kwamuri, asi chipo chaMwari; hazvibvi pamabasa, kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza". Iwe wava muna Kristu. Saka nzwisisa kuti wava munhu werudzii. Rarama semunhu anoziva zvaava izvi.
Ongorora zvekare zano raMwari. Vakataura kuna Abrahama vachiti, "Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe". Tinoverenga mashoko aya muna Genesi 12:2. Abrahama haasi iye akakumbira hukuru. Mwari ndivo vakanga vari kuronga kudai. Chinhu chavakasarudza kuita voga. Saka Mwari ndivo vakaronga kuti uve munhu mukuru.
Zvino, iwe unogona kunge uri mwana wedzinza raAbrahama. Asi unogona hako kunge usina kuronga kuva munhu mukuru. Mwari vanoda kuti uve mukuru zvakadero. Saka haufaniri kushandira hukuru hwacho. Hukuru huri murudzi rwako. Saka rarama semunhu anoziva kuti mukuru. Rarama semunhu werunako. Funga semunhu mukuru. Taura semunhu mukuru. Ita zvinoitwa nevanhu vakuru. Rarama semunhu mukuru.
Ndinokutendai, Baba vandinoda. Makandiita munhu mukuru. Makandiita munhu werunako. Ndinoita zvinhu zvikuru. Ndinoita zvinhu izvi muhupenyu hwangu. Ndinoita zvinhu izvi muhupenyu hwevamwe. Ndinoshandisa simba reShoko raMwari kuita zvinhu izvi. Ndinobatsirwavo naMweya Mutsene kuzviita. Mweya Mutsvene ava vari kushanda mandiri. Ndinodzidza Shoko raMwari. Ndinovona hukuru hwangu muShoko umu. Ndinovona hupenyu hwekukunda chete. Ndinotungamirirwa nenjere. Ndidzo dzinonditungamirira kuita zvinhu zvikuru. Ndinoita zvinhu izvi kuti Humambo hwenyu hukure. Muzita raJesu. Ameni.
Genesi 12:1-3; Genesi 26:12-13; Eksodo 11:3